10 सबैभन्दा आकर्षक रेल स्टेशन मा स्पेन | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा स्पेन > 10 सबैभन्दा आकर्षक रेल स्टेशन मा स्पेन
त्यहाँ स्पेन रोचक र सक्रिय रेल स्टेशन को एक नम्बर हो. तपाईं पाउनुहुनेछ उच्च गति, मध्यम दूरी, क्षेत्रीय, महानगरीय र होटल-रेल देश भर यात्रा. घेरिएको सानो व्यक्तिहरूलाई ठूलो आधुनिक स्टेशन बाट प्रकृति, यी हुन् 10 स्पेन सबैभन्दा आकर्षक ट्रेन स्टेशन को.
बार्सिलोना, स्पेन (संतों ट्रेन स्टेशन)
यो आधुनिक स्टेशन एक हो सबैभन्दा व्यस्त ट्रेन स्टेशन बार्सिलोना मा. यो दुवै लागि मुख्य रेल स्टेशन हो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रेल जडानहरू. यो स्टेशन एकदम ठूलो र शहर को केन्द्र भित्र स्थित छ. यो दुवै द्वारा प्रयोग गरिन्छ स्थानीय र पर्यटक र स्पेन मार्फत सबैभन्दा रेल स्टेशन तपाईंलाई जडान हुनेछ.
मैड्रिड (Puerta डे Atocha ट्रेन स्टेशन)
यो स्टेशन मैड्रिड मा सबै भन्दा ठूलो छ र धेरै वर्ष को लागि वरिपरि भएको छ. यो एक सुन्दर स्टेशन र सब भन्दा मनमोहक ट्रेन स्टेशनहरु मध्ये एक, कि भित्र सुन्दर ट्रपिकल बगैचा र कछुवा मन्दिरमा घरहरुमा. मा मार्च 11, 2004, अब 11-एम रूपमा स्पेन ज्ञात एक दिन, 191 मान्छे बम एक श्रृंखला मा मारिए. तिनीहरूले चार यात्रु रेल यो स्टेशन र नजिकका दुवै देखा पर्यो.
sevilla (सन्त Justa ट्रेन स्टेशन)
सन्त Justa स्पेन तेस्रो-व्यस्त स्टेशन हो, बाह्र मञ्चहरूमा को कुल संग. यो ओस्लो मनपर्ने सन्तहरू एक पछि नाम (सान्ता Rufina को बहिनी). निर्माण ओस्लो गरेको शहर को केन्द्र को पूर्वी भाग मा स्थित छ. यो सफा गठन र डिजाइन को शहरमा आधुनिकीकरण योजना एउटा उदाहरण हो 1991.
Ronda रेलवे स्टेशन
Ronda स्पेन मा सबै भन्दा सुन्दर सहर मध्ये एक हुन भने. आकर्षक ट्रेन स्टेशन यस स्पेनिश विकल्प यो संकेत छ, र निश्चित गर्नुपर्छ-हेर्न. स्टेशन फिर्ता बनाइएको थियो 1892, तथापि, यसलाई अद्यावधिक र सुन्दर भएको छ वर्ष कायम. स्टेशन अझै "एंग्लो" वा उपनिवेश भारतीय नजर हुनत छ. काठ-fringed चदंवा को आसन्न मंच फैले फलाम स्तम्भहरु समर्थित छ.
पुएब्ला de Sanabria ट्रेन स्टेशन
यो स्टेशन जामोरा को सुन्दर पुरानो शहर मा स्थित छ. यो क्षेत्रीय र परम्परागत वास्तुकला कारण हो जो किनभने यसको सौन्दर्य को सबै भन्दा प्रसिद्ध रेल स्पेन स्टेशन मध्ये एक छ, स्लेट rooves संग, ashlar पत्थर र ठूलो केन्द्रीय कट्टर अध्यक्ष. यो स्टेशन पनि जडान रूपमा Ruta डे ला Plata मा थियो सान्दर्भिकता लागि प्रसिद्ध छ स्थान.
Zamora ट्रेन स्टेशन
यो स्टेशन क्यासटिले र लियोन मा जामोरा को शहर मा स्थित छ र कहिल्यै गरे सबै भन्दा आकर्षक ट्रेन स्टेशन हुन मानिन्छ. यसको निर्माण मा रोकिन थियो 1929 र अन्ततः मा पूरा भएको थियो 1958. यो एक लेट गोथिक शैली को एक रिमाइन्डर हो कि केही विवरण एक captivating पुनर्जागरण प्रेरणा छ. यो साँच्चै सास-लिनुभएको छ.
Estacion नोर्ट ट्रेन स्टेशन
यो रेल स्टेशन San सेबस्टियन को शहर मा पाउन सकिन्छ, दुवै भेटी एक सुन्दर ठाउँ अविश्वसनीय समुद्र र पहाड दृश्य. यो स्टेशन को प्लेटफार्म कवर चदंवा फ्रान्स एफिल टावर डिजाइन गर्ने धेरै एउटै व्यक्ति छ जसले गुस्ताव एफिल द्वारा डिजाइन भएको थियो रूपमा नै एक आकर्षण छ.
आकर्षक ट्रेन स्टेशन यस त्यागेर छानिने स्पेन र बीच सीमाना मा पाउन सकिन्छ फ्रान्स. यो खोलिएको थियो 1928 र को "टाइटैनिक स्वराङ्कित पहाड."यो दुई देशहरू बीच तर पछि व्यापार बढाउने कायम थिएन बनाइएको थियो र पछि त्यागेर गरिएको छ 1970. स्टेशन आज टुक्रा गर्न झर्ने छ. पर्यटकहरु अझै पनि यो आफ्नो दिन थियो कसरी महान् को एक समानता हेर्न सक्षम छन्. थप स्पेनिश पर्यटकहरु देखि साइट भ्रमण गरेका 2013. कहिल्यै स्टेशन भ्रमण गर्ने यो खुला हुँदा संख्या भन्दा बढी.
Estacio डेल नोर्ड ट्रेन स्टेशन
यो भ्यालेन्सिया शहर मा मुख्य रेल स्टेशन हो. यसलाई मा बनाइएको थियो 1917 र युरोपेली आधुनिकतावादी वास्तुकला को एक प्रतीक भयो. यो केन्द्रमा ठूलो घडी संग एक ठूलो भवन र एक चीललाई मूर्तिकला छ, जो स्टेशन को आज भन्दा प्रतिनिधि तत्व को छन्. आकर्षक ट्रेन स्टेशन यस छानिने पनि सांस्कृतिक ब्याज को एक भवन मानिन्छ.
अल्जेकिरास ट्रेन स्टेशन
यो स्टेशन कारण चाहनुभएको एक ऐतिहासिक आवश्यकता गर्न अल्जेकिरास र पोर्ट देखि केही किलोमिटर माथिल्लो भाग मा स्थित छ यो जिब्राल्टर 100-टन तोप को दायरा बाहिर हुन थियो. यो ट्रेन को लागी यात्रा गर्न चाहने मानिस द्वारा प्रयोग गरीन्छ जिब्राल्टर को रक. यो पहिलो खुलेको थियो 1982 र अझै पनि पुरानो-स्कूल नजर छ र यसलाई महसुस.
त्यहाँ आज स्पेन तिनीहरूलाई को एक नम्बर सञ्चालन हुँदा, यी हुन् 10 भ्रमण गर्न स्पेन सबैभन्दा आकर्षक रेल स्टेशन को. रेल यात्रा को ठूलो भाग हो सार्वजनिक यातायात देश र प्रणाली बोर्ड मार्फत सजिलै चल्छ. त्यहाँ एक नम्बर हो सुन्दर दिन यात्राको साथै माथि-रात रोमांचक रेल द्वारा गरिन र यो तपाईं स्पेन भ्रमण गर्दा रेल प्रयोग गर्न आफ्नो गर्दा लायक छ.
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो र सस्ता टिकट पाउन एक ट्रेन सेव, यसले लिन्छ3केही मिनेट अब ट्रेन टिकट बुक गर्न एक ट्रेन सुरक्षित. स्पेन सबैभन्दा आकर्षक ट्रेन स्टेशन गर्न, सहित सबै लोकप्रिय भुक्तानी विधिहरू प्रयोग गरेर भुक्तानी, क्रेडिट कार्ड र Paypal.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-fascinating-train-stations-spain%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल
यूरोपेन्ट्रावेल रेल रेल स्टेशन यात्रा travelspain